Dual Storage Blade 15 အပြင် Mercury White Edition ကိုပါ Razer ကြေညာ
11 Oct 2018 . 2:13 PM
Gaming Laptop ထုတ်တဲ့နေရာမှာ “Apple on Windows” လို့တောင် အတင်စားခံထားရတဲ့ Razer ၊ PC လောကမှာလည်း “Best Work & Play” Achievement ကို Razer Blade 15 Gaming Laptop နဲ့ ရရှိထားတယ်။ Mobile ဘက်မှာလည်း Razer Phone2ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ထားပြီ။ ဒါကိုမှ အားမရသေးတဲ့ Razer ၊ အောင်မြင်နေတဲ့ Blade 15 ကိုမှ Edition ၂ မျိုး ထုတ်ထားသေးတယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီမလို့ Razer Fans တွေ ကြွေသွားရပြီထင်ပါတယ်။
အခုချိန် MSI GS65 ၊ Asus GM501 စတဲ့ Gaming Laptop တွေမှာ Primary SSD အပြင် Secondary Storage အနေနဲ့ HDD ထည့်ပေးတယ်၊ တန်ဖိုးအားဖြင့်လည်း Blade 15 နဲ့ မကွာဘူး။ ဒီအတွက် Alternate Version ဆိုပြီး Dual Storage Edition ကို သပ်သပ် Razer မိတ်ဆက်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Blade 15 Family မှာ Edition ၂ မျိုး ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး Alternate Version နဲ့ Orignal Version ဘယ်မှာ စကွာသွားသလဲဆိုရင် Starting Price က 1,599 နဲ့ 1,899 ဖြစ်သွားတယ်။
Only Green Backlight (Alternate Version)
Blade 15 အသစ်ကို ဘာနာမည်မှ ပေးမထားတာမလို့ Dual Storage Edition ဟာ Entry-level Razer Gaming Laptop ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ထပ်ပြီး ဘာကွာသွားသေးလဲဆိုရင် Original Blade မှာလို Vapour Chamber ပါမလာတော့ဘူး၊ ရိုးရိုး Metal Pipe Cooling ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း Body ပိုထူလာတယ်။ အဲ့သလို Cooling System ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် GTX 1070 မရတော့ဘူး၊ 144Hz Panel လည်း Discard လုပ်တဲ့ထဲ ပါသွားခဲ့ပြီ။
ဒါကြောင့် Affordable Gaming Laptop လို့ ပြောတာထက် GPU ပါဝါအရမ်းမလိုဘူး၊ Dual Storage Option နဲ့ Entertainment သမားဖြစ်နေခဲ့ရင် $1,599 တန် Blade 15 က အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပါ။ အရင် Blade Family မှာလို Chroma Backlight သုံးပေးထားတယ်။ Core i7-8750H Processor ၊ 16GB RAM ၊ GTX 1060 Max-Q Graphics တွေသုံးထားပေးတာဆိုတော့ Orginal Blade 15 လောက် မစွာပေမယ့် ဂိမ်းတော်တော်များများကို Medium to High Setting အထိ ကစားနိုင်ဦးမှာပါ။
ဒီလို Orignal Blade လို High-end Specs တွေပါမလာ၊ FHD 60Hz Display သုံးထားတဲ့ Blade 15 ဟာ ဈေးကွက်အနေထားအလိုက် ဝယ်လိုအားများအောင် လျှော့်သင့်တာလျှော့်၊ တိုးသင့်တာတိုး Razer လုပ်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။ Ethernet Port တောင်ပါလာပါသေး၊ အခုချိန်က Cable ကြိုးတပ်ပြီး အင်တာနက်သုံးရတဲ့ခေတ်ကုန်နေပြီဆိုပေမယ့် ဘာကြောင့်ထည့်ပေးတာလဲဆိုတာ သိသာပါတယ်။
Razer transforms Blade 15 into Fancy White Edition
အခုလို Alternate Version ရဲ့ Minor Upgrade အပြင် Original Blade ကိုမှ “Mercury White” အရောင်နဲ့ Exclusive ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Razer ကြေညာချက်ပါ။ အဖြူစွတ်စွတ်မဟုတ်ပေမယ့် ခဲရောင်ဖက်သန်းသလို ရှိနေပြီး ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် MacBook Pro နဲ့တောင် သွားဆင်နေပါတယ်။ ဘာ Specifciation တစ်ခုမှ ပြောင်းမထားသလို GPU ကို GTX 1060 နဲ့ 1070 Max-Q ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်မယ်၊ အဖြူရောင် Keyboard ဖြစ်သွားမယ်၊ နောက်က Razer Logo မီးမလင်းတော့ဘူး။ ဒါလေးတွေပဲ ပြောင်းလဲမှုရှိနေတဲ့ Dual Storage Edition နဲ့ Mecury White Edition တို့ကို လာမယ့် Quarter4ကျရင် ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ Razer ကြေညာထားပါတယ်၊ Mercy White Edition ရဲ့ ရောင်းဈေးကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Dual Storage Blade 15 အပွငျ Mercury White Edition ကိုပါ Razer ကွညော
Gaming Laptop ထုတျတဲ့နရောမှာ “Apple on Windows” လို့တောငျ အတငျစားခံထားရတဲ့ Razer ၊ PC လောကမှာလညျး “Best Work & Play” Achievement ကို Razer Blade 15 Gaming Laptop နဲ့ ရရှိထားတယျ။ Mobile ဘကျမှာလညျး Razer Phone2ဆိုပွီး မိတျဆကျထားပွီ။ ဒါကိုမှ အားမရသေးတဲ့ Razer ၊ အောငျမွငျနတေဲ့ Blade 15 ကိုမှ Edition ၂ မြိုး ထုတျထားသေးတယျလို့ ကွညောလိုကျပွီမလို့ Razer Fans တှေ ကွှသှေားရပွီထငျပါတယျ။
အခုခြိနျ MSI GS65 ၊ Asus GM501 စတဲ့ Gaming Laptop တှမှော Primary SSD အပွငျ Secondary Storage အနနေဲ့ HDD ထညျ့ပေးတယျ၊ တနျဖိုးအားဖွငျ့လညျး Blade 15 နဲ့ မကှာဘူး။ ဒီအတှကျ Alternate Version ဆိုပွီး Dual Storage Edition ကို သပျသပျ Razer မိတျဆကျလိုကျပုံရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ Blade 15 Family မှာ Edition ၂ မြိုး ရှိသှားမှာဖွဈပွီး Alternate Version နဲ့ Orignal Version ဘယျမှာ စကှာသှားသလဲဆိုရငျ Starting Price က 1,599 နဲ့ 1,899 ဖွဈသှားတယျ။
Blade 15 အသဈကို ဘာနာမညျမှ ပေးမထားတာမလို့ Dual Storage Edition ဟာ Entry-level Razer Gaming Laptop ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ထပျပွီး ဘာကှာသှားသေးလဲဆိုရငျ Original Blade မှာလို Vapour Chamber ပါမလာတော့ဘူး၊ ရိုးရိုး Metal Pipe Cooling ဖွဈသှားတယျ၊ အဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး Body ပိုထူလာတယျ။ အဲ့သလို Cooling System ပွောငျးသှားတဲ့အတှကျ GTX 1070 မရတော့ဘူး၊ 144Hz Panel လညျး Discard လုပျတဲ့ထဲ ပါသှားခဲ့ပွီ။
ဒါကွောငျ့ Affordable Gaming Laptop လို့ ပွောတာထကျ GPU ပါဝါအရမျးမလိုဘူး၊ Dual Storage Option နဲ့ Entertainment သမားဖွဈနခေဲ့ရငျ $1,599 တနျ Blade 15 က အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြမှုပါ။ အရငျ Blade Family မှာလို Chroma Backlight သုံးပေးထားတယျ။ Core i7-8750H Processor ၊ 16GB RAM ၊ GTX 1060 Max-Q Graphics တှသေုံးထားပေးတာဆိုတော့ Orginal Blade 15 လောကျ မစှာပမေယျ့ ဂိမျးတျောတျောမြားမြားကို Medium to High Setting အထိ ကစားနိုငျဦးမှာပါ။
ဒီလို Orignal Blade လို High-end Specs တှပေါမလာ၊ FHD 60Hz Display သုံးထားတဲ့ Blade 15 ဟာ ဈေးကှကျအနထေားအလိုကျ ဝယျလိုအားမြားအောငျ လြှေျာ့သငျ့တာလြှေျာ့၊ တိုးသငျ့တာတိုး Razer လုပျလိုကျတယျထငျပါတယျ။ Ethernet Port တောငျပါလာပါသေး၊ အခုခြိနျက Cable ကွိုးတပျပွီး အငျတာနကျသုံးရတဲ့ခတျေကုနျနပွေီဆိုပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ထညျ့ပေးတာလဲဆိုတာ သိသာပါတယျ။
အခုလို Alternate Version ရဲ့ Minor Upgrade အပွငျ Original Blade ကိုမှ “Mercury White” အရောငျနဲ့ Exclusive ဝယျယူနိုငျမယျ့ Razer ကွညောခကျြပါ။ အဖွူစှတျစှတျမဟုတျပမေယျ့ ခဲရောငျဖကျသနျးသလို ရှိနပွေီး ရုတျတရကျကွညျ့လိုကျရငျ MacBook Pro နဲ့တောငျ သှားဆငျနပေါတယျ။ ဘာ Specifciation တဈခုမှ ပွောငျးမထားသလို GPU ကို GTX 1060 နဲ့ 1070 Max-Q ဆိုပွီး ရှေးခယျြနိုငျမယျ၊ အဖွူရောငျ Keyboard ဖွဈသှားမယျ၊ နောကျက Razer Logo မီးမလငျးတော့ဘူး။ ဒါလေးတှပေဲ ပွောငျးလဲမှုရှိနတေဲ့ Dual Storage Edition နဲ့ Mecury White Edition တို့ကို လာမယျ့ Quarter4ကရြငျ ရောငျးခပြေးသှားမယျလို့ Razer ကွညောထားပါတယျ၊ Mercy White Edition ရဲ့ ရောငျးဈေးကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
by 2B .6mins ago